Yuusuf Yare | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 10
DHAGEYSO:- Xiliga ay dhacayso Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya
MUQDISHO:- Abuukaate Cumar Dhageey Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta doorashooyinka dadban, waxa uu shaaciyay in aysan shaqadooda ahayn in ay go’aan ka gaaraan doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa Ku xigeen iyo sidoo kale doorashada Madaxweynaha. Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta doorashooyinka dadban, waxa uu saxaafadda u sheegay in doorahsada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dib dhici doonto waqtigii loo qorsheeyay oo ahayd 30ka bishan, hase ...
Faah Faahin:- Weerar lagu Qaaday jaamacadda Ohio ee dalka Maraykanka
Columbus Ohio:- C/risaaq Cali Cartan, oo 20 sano jir Soomaali ah, ayaa weerar ku qaaday shalay Jaamacaddii uu isagu dhiganayay ee Ohio State University, ee magaalada Colombus ee gobolka Ohio. Weerarkaasi waxa uu geystay dhaawcyo ilaa 10 ku dhow, isaguna waxa dilay askari boolis ah. Booliska iyo Hey’adaha dambi baarista Maraykanka ayaa wali baaritaan ku haya hooygii uu Magaalada Columbus ...
Axmed Macalin Fiqi oo ku Guuleystay Doorasho aad u Sahlaneed
Cadaado:- Wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee Gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Macalin Fiqi uu goor dhow ku guuleystay kamid noqoshada xildhibanada Soomaliya kadib doorasho ka socota dagmada Cadaado. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in doorashadii manta uu ku guuleystay Axmed Macalin Fiqi ay aheyd mid aad u sahlaneed. Fiqi ayaa u mahad celiyay intii u ...
Faah Faahin:- Dagaalo ka socda Gobolka Mudug
Mudug:- Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal saaka dib uga qarxay deegaano hoostaga Degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug. Dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan, ayaa waxa uu dhaxmaray dadka Xoola dhaqatada ah iyo kooxada shabaab. Warar kala duwan ayaa dagaalka kasoo baxaya waxa uuna kasocdaa, deegaanada Daba-galo iyo Dumaaye oo hoos taga Degmada Xarar-dheere ee Gobolka ...
Maxaa looga hadlayaa kulanka ka socda xarunta AMISOM ee Xalane??
MUQDISHO:- Wararka iminka naga soo gaaray xarunta amisom ee xalane magaalada muqdisho, waxa ay sheegayaan goor dhow xarunta Xalane uu ka furmay shir looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka Dalka Soomaaliya. Shirka waxaa goobjoog ka ah Guddoomiha Baarlamanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Aaden (jawaari) iyo madax Qaramada midoobay u qaabilsan arimaha soomaaliya Michael keating. Kulanka deg dega ah waxaa lagu falanqeynayaa sidii ...
Daawo:-Wiilka Donald Trump oo Laga Saaray Iskuulkiisii horey Ogow sababta!!
Maraykanka:- Warbaahinada Caalamiga ee ka soo baxa dalka maraykanka waxa ay daabaceen cabsi soo wajahday Wiilka ugu yar qoyska Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. Barron oo 10 sano jir waa Wiilka ugu yar qoyska Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump, waxaana la shaaciyay in si deg deg ah looga soo badalay Iskuulkiisii horey u dhigan jiray kadib ...